प्रधानमन्त्री ओलीको सेटिङ, प्रचण्ड र माधव नेपालले बुझ्नै सकेनन् | Safal Khabar
सोमबार, २४ फागुन २०७७, ०९ : ०४
नेकपाको नामको मुद्दामा ऋषि कट्टेलले २१ मंसिर २०७५ मा सर्वाेच्चमा रिट हाल्न पुगेका थिए । चार दिनपछि यसमा कारण देखाउ आदेश अदालतले दिएको थियो । ६ महिनापछि २ जेठ ०७६ मा हेर्न नभ्याइनेमा रहेको मुद्दा १६ असारमा अन्य आदेश भएको थियो । २०७६ मंसिर १० मा हेर्न नभ्याइनेमा रहेको मुद्दा ८ फागुन २०७६ मा इजालस स्थगितमा परेको थियो । त्यसपछि १० महिनासम्म स्थगित रहदै आएको मुद्दा एकाएक प्रतिनिधीसभा विघटन पछि भने अदालतमा निर्णयक ढंगले अगाडी बढेर आयो ।
१४ पुस ०७७ मा निवेदकवाट स्थगित भएको मुद्दा ६ माघमा महान्यायधिवक्ता कार्यालयबाट स्थगित गरियो । २२ माघमा विपक्षवाट स्थगित, ६ फागुनमा पनि विपक्षबाट स्थगित र १३ फागुनमा बहस भएको मुद्दामा २३ फागुनमा अदालतले फैसला गरिदियो । अदालतले दुई वर्षसम्म कुनै बहस नगरी प्रतिनिधीसभा पूनस्थापना पछिको दोश्रो दिनमै एकाएक बहस गराएर संसदको अधिवेशन शुरु हुने दिन नै फैसला सुनाएको थियो । फैसलामा कट्टेलले दाबी गरेझै नाम मात्र दिएको भए अलग कुरा हुने थियो । तर तत्कालिन एमाले र माओवादी केन्द्रका बीचमा एकता नै भईसकेको विषयमा समेत अधिकार क्षेत्रबाहिर गएर राजनीतिक निर्णय अदालतले गरेको छ ।
‘निर्वाचन कानुनले कुनै नाम दल दर्ता गराउदा पछि गएर त्यही नाममा दर्ता गराउन पाइदैन् । सर्वाेच्चले फैसला दिन मिल्छ । तर यदि तिमी एकीकरण गर्ने भए, निर्वाचन आयोगमा अविलम्व पुगेर गर भन्न मिल्छ ? कँहाबाट आयो अदालतलाई यसो भन्ने अधिकार ?’ संविधानविद्द भीमार्जुन आचार्यले भने,–‘कानुनलाई टेकेर गरेको निर्णयलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । तर आवश्यक भन्दा बढि, चहिने भन्दा बढी सक्रियता अदालतले किन देखायो ? एकीकरण गर्ने भए अविलम्व निर्वाचन आयोगमा उपस्थित हुनु के भनेको यो ? के उसले ठेक्का लिएको छ कुनै दल एकीकरण गर्ने र विघटन गर्ने ?’
अदालतले यसरी राजनीतिक भाषामा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्ँयूताइदिने निर्णय गरेर ओलीलाई एमाले र सूर्य चिन्ह दिने, पूर्व एमाले र माओवादी केन्द्रकै रुपमा अब राजनीति गरौं भनेर ओलीले पार्टी बैठकमा राख्ने गरेको सम्बोधनकै हुबहु भाषामा यो निर्णय आएको छ । ओलीको सेटिङ यही नेर रहेछ । यसलाई प्रचण्ड माधव नेपालहरुले बुझ्न सकेनन् ।
#ओली #प्रचण्ड #माधव